#အထင်သေးခဲ့မိသည်။ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက နေစရာအာရုံ လေးတွေကို ပေး ထားတယ်.. တဲ့…၊ နေစရာအာရုံ လေးတွေ ဆိုတာ အင်မတန် လွယ် ပါ တယ်။ တဲ့…ဗုဒ္ဓ ကို ကြည်ညို ကြတဲ့ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတွေ ဆိုရင် ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ရဲ့ အရည် အသွေးကို အားလုံးသိနေ ကြတယ်။အဲဒီ အခါမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ ဂုဏ်ကို အာရုံ ပြုပြီး နေလို့ ရတယ်၊ အရဟံ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ, ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော စတဲ့ မြတ်စွာ ဘုရား ရဲ့ ကြည် ညိုစရာ ဂုဏ်တော် တွေကို အာရုံ ပြုပြီး တော့ အသိဉာဏ် နဲ့ နားလည်အောင် လေ့လာ ဖတ်ရှုပြီး တော့ မြတ်စွာ ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော် တွေကို အာရုံပြု ပြီးတော့ နေလို့ ရတယ်။ တဲ့..အနည်းဆုံး ရုပ် ထုတွေ-ပုံတော် တွေကနေ စပြီးတော့ မြတ်စွာ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော် မြတ်ကြီးရဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်စွမ်း အား တွေ သီလ ဂုဏ် သမာဓိ ဂုဏ် ပညာ ဂုဏ် တွေကို အာရုံ ပြုနိုင်အောင် လုပ်ရမယ်။ တဲ့…ဘုန်းကြီးတို့ နှစ်စဉ် ဂျာမနီကို သွားတဲ့အခါ ဂျာမန် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးက လျှောက်တယ်၊ တဲ့….သူက အစ ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ဘူး၊ နောက်တော့ သူက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်လာ တယ်။ တဲ့…သူက ဘာပြော တုန်းဆို ရင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ရဲ့ ရုပ် ပွားတော် ကို ဖူးလိုက် ရတဲ့ အချိန် မှာ သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ကြည်နူး တယ်တဲ့၊ တည်ငြိမ် တဲ့ မျက်နှာ တော်နဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ ထိုင်နေ တော်မူပုံဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်ကို ကြည် လင်အေးချမ်းပြီး ကြည်နူး စေတယ်လို့ ဘုန်းကြီးကို လျှောက်ခဲ့ ဖူးတယ်နော်။နောက် မြတ်စွာ ဘုရား ရုပ်ပွားတော်ကို သူသွားလေရာ ပင့်ဆောင်သွားတယ်၊ တဲ့…. သူဘယ်ကိုပဲ သွားသွား သူ့ရဲ့သေတ္တာထဲမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကို ထည့်ပြီး ပင့်သွားတယ်၊ တဲ့…. သူနေတဲ့နေရာမှာ အဲဒီရုပ်ပွားတော်ကို တင်ထားတယ်၊ တဲ့…ရုပ်ပွားတော် ကို ဖူးမျှော်နေရင် သူ့ရဲ့စိတ်တွေ ဟာ ကြည်နူး နေတယ်၊ အာရုံပြုပြီးတော့ သူနေတယ် တဲ့.. ပုံတော် က နေပြီးတော့ ဂုဏ်တော် ကို သူရောက် လာတယ်၊ ပုံတော်ပဲ ဖူးဖူး၊ ဂုဏ် တော်ပဲ ဖူးဖူး ပုံတော် ဆိုတာ ဘဂဝါထဲ မှာ ပါ ဘာ တယ်…တဲ့..။
#ဒီလို မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးနေတဲ့အခါမှာလောဘစိတ်တွေဝင်လာသလား,? #ဒေါသစိတ်တွေဝင်လာသလား၊ ?#တွေဝေနေတဲ့စိတ်တွေရှိသေးသလား၊ ? တဲ့… #ဒီလိုစိတ်တွေ မဖြစ်တော့ဘူးနော် လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ဝင်မလာတဲ့ အတွက်အကုသိုလ်တရားတွေဝင်မ လာတော့ ဘူး၊ (ဒါကတော့ အနှစ် သာရပါ) #ဒီလို အကုသိုလ် တရားတွေဟာ ငြိမ်နေတဲ့ အတွက် စိတ် ငြိမ်တယ်၊ ဒီတော့ အကုသိုလ် တရားတွေ ငြိမ် သွားပြီး no active မလှုပ် ရှားတော့ ဘူး၊ မ လှုပ် ရင် အန္တရာယ် မရှိ ဘူး၊ #ဒီ အကုသိုလ် တရားတွေ ငြိမ်နေ တဲ့ အတွက် စိတ်ဟာ အကုသိုလ် တွေအပေါ်မှာ မလှုပ်ရှား တော့ဘူး၊ #ငြိမ်နေရင်ကာယကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူး၊ #၀စီကံလည်း မ ဖြစ်တော့ဘူး၊ #မနောကံလည်း မမြောက် တော့ဘူး၊ ဝစီကံ ကာယကံ ဒါတွေ မမြောက်ဘူးဆိုရင် active မဖြစ်တော့ဘူး။ #ဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေ့ရတယ်။ ဘုရား ဂုဏ် တော်တွေထဲမှာ စိတ်က တဖြောင့်တည်းရှိ နေရင်-အားလုံးခံစားဖူးပါလိမ့်မယ်- #ကြည်နူးပြီးဝမ်း သာပီတိ ဖြစ်နေ မယ်။ တဲ့…(စာရေးသူက တော့ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်လို့ လာရပါပြီ)ဒါ ကိုယ့် သန္တာန်မှာ ဖြစ် မဖြစ် စဉ်းစား ကြည့်နော်၊ မဖြစ်သေးရင် ဖြစ်အောင်လုပ်၊ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ပီတိဆို တာလေး ဖြစ်လာ လို့ရှိရင် ကိုယ်လည်း ငြိမ်းချမ်းမယ်, စိတ်လည်း ငြိမ်းချမ်းလာမယ်။ #ဒါတွေ ကတောင်း ဆိုနေရ မယ့်အရာ တွေမဟုတ် ဘူးတဲ့၊ #ဒီprocess ကဒီတစ်ခုလာရင် နောက်တစ်ခုလာ ကိုလာ ရမယ်တဲ့…။
(စာရေးသူ က အရင်ကဆိုရင် ငါစိတ်ချမ်းသာချင်တယ် စိတ်ချမ်းသာချင် လိုက်တာ ဆိုပြီး တနှစ် ကျော်လောက် အော်ငိုနေ ခဲ့ရသူပါ )ဆိုပါစို့- လျှပ်စစ်မီးချောင်းလေး ဖွင့်လိုက် လို့ရှိ ရင်အလင်း က တမင်တကာ ခေါ်စရာ လိုဦးမလား၊ အမှောင် ကို ပယ်ပျောက်ဖို့ တမင်လုပ်စရာ လိုဦး မလား၊ မလို တော့ဘူး နော်၊ အလင်းရောက် လာရင် အမှောင်က သူ့ဟာသူ ပျောက် သွားလိမ့် မယ်။ တဲ့… ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားကို အာရုံပြုပြီးတော့ စိတ်ထဲကြည်နူးလာတဲ့အခါမှာ ပါမောဇ္ဇဆိုတဲ့ ဝမ်း မြောက် ဝမ်းသာ ဖြစ်လာတယ်၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်လာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် စိတ်ထဲမှာငြိမ်း ချမ်းတယ်, ကိုယ်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်း တယ်၊ ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အခါကျတော့ သုခဆို တဲ့ချမ်းသာ မှု ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ချမ်းသာတော့ စိတ်တည်ငြိမ်သွားတယ်။ ဒါ အခုချက်ချင်း လက်ငင်း ရမယ့် အကျိုး ဖြစ်တ ယ်။ နေ့စဉ် ဘဝမှာ အဲဒီ လိုလေး နေမယ် ဆိုရင် စိတ်ကလေး တည်ငြိမ်မှု လေး ရ လာမယ်၊ စိတ်တည် ငြိမ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလေ။ တဲ့…လူတွေဟာ သောက ဖြစ်စရာတွေ ကြုံရ မယ်, ဒေါသ ဖြစ်စ ရာတွေ ကြုံ ရမယ်၊ အမျိုးမျိုး ကြောင့် စိတ်တွေ မတည်ငြိမ် တဲ့ အခါမှာ ဘုရားဂုဏ် တော်တွေ ကို အာရုံပြုပြီး နေလိုက် မယ်ဆိုရင် စိတ်ကလေး တည်ငြိမ် ပြီးတော့ ငြိမ်း အေး လာလိမ့် မယ်။ တဲ့..ဒီနည်း ကို မသိတဲ့ သူတွေ ကျတော့ တခြား နည်းတွေ နဲ့ စိတ် ကို တည် ငြိမ်လာအောင် လုပ်ကြတယ် တဲ့..။
(#စာရေးသူက ထိပ်ဆုံးကပါခဲ့သည်ပေါ့ )အိပ်မပျော်တာစဥ်းစားလို့… အဲ့လိုမစဥ်းစားအောင်ဆို ရင် ဦးခေါင်းမရှိမှပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပြီး စာအုပ်တွေ ရှာဖတ်တော့ ခေါင်းဖြတ် လေ့ကျင့် ခန်းတောင် ကျင့်မိ ခဲ့သည် ပေါ့… ကံသီ ပေလို့ပေါ့.. အိပ်ဆေး တွေ သောက်တယ်၊ မူးယစ် ဆေးတွေ သုံး ကြ တယ်၊ တဲ့… ဒီနည်းတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ အများကြီး ဆက် ခံကြ ရတော့ တာပါ ပဲ။ တဲ့…#တရား ဓမ္မမှာ#side#effectဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ဆိုတာ မရှိဘူး၊ တခြား စိတ်ငြိမ် ဆေးတွေကတော့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးလာမယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ စိတ် တည် ငြိမ်အောင် ကြိုးစားမယ် ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခ ရောက်မယ်။ တရား ဓမ္မနည်း နဲ့ စိတ်တည် ငြိမ်အောင် ကြိုးစား ရင် တော့ အဲဒီ ဘေး ထွက် ဆိုးကျိုး တွေ မရှိဘဲနဲ့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်း တဲ့ ငြိမ်းအေး မှုမျိုး ရနိုင်တယ်။ တဲ့…
ဆိုသော ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားသော တရားတော်တွေကို နာကြားပြီး…စိတ်ထဲ ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်စ ရာ တခုက ဝင်ရောက် လို့ လာခဲ့ ပါတယ်…အာ့ဒါက တော့.. ခြားမ ဟုတ်ပါ… ဟိုး… အရင်တုန်းကများဆိုရင်.. ဘုရား ဂုဏ်တော်ပွားတာကို… ပွားစရာအ လုပ်လို့တောင် မထင် ခဲ့ပါ ဘူး…ပွားရင် လည်း ဘယ် အကျိုး ရတယ်… ဘာဖြစ်တယ် ဆိုတာလည်း မသိခဲ့ ပါဘူး…ပို၍ ဆိုးသည် က ဘယ်လို ပွားရ မလဲ ဆိုတဲ့ နည်းစနစ်ဆိုတာ သိဖို့ ဝေလါဝေးပေါ့…ဟော….. ရိပ်သာ ဝင်ပြီး နောက်ပိုင်း တွေလဲ ကျရော…အားပါးပါး.. ဘယ် ဆရာတော် ဟော..ဟော.. ဗုဒ္ဓါနုသတိ အ ကြောင်းတွေ ပါနေတော့ တာပါလား ဆိုပြီး.. အဲ့ဒီတော့မှ နာရတဲ့ တရား… ဖတ်ရတဲ့ စာတွေ ဟာ အဓိပ္ပါယ် တွေ ရှိရှိလာခဲ့ရပါတယ်…တန်ဖိုးလည်းထား တက်လာခဲ့ပါတော့တယ်…အနှစ်သာ ရကို အတော် သဘော ပေါက်ခဲ့ရ လို့ပါပဲ….အရင် က မသိ တာလည်း မဆန်းဘူး လေနော်…. သေသေ ချာချာ မှ မလေ့လာ မစူးစမ်း မကျင့် ကြံခဲ့ တာကိုး……နောက်ပြီး #အကြမ်းစား ကိလေသာ ပယ် နည်း၊ #အလတ်စား ကိလေသာ ပယ်နည်း ၊ #အနုစား ကိလေသာ ပယ်နည်း ဆိုတာတွေကိုလည်း ဘယ်လို နှလုံးသွင်း ရတာလဲ ဆိုတာကို #လုံးဝ မသိခဲ့တာပါ…ဆိုကြပါစို့…ယခုလို မြတ်စွာဘုရား ပုံတော်ကို အာရုံ ယူပြီး ဂုဏ်တော်တခုခုကို စူးစူးစိုက်စိုက် ပွားနေခြင်းအားဖြင့် အထက်က ဆရာ တော်ဘုရားကြီး..ဟောခဲ့သလို… ပွားနေတဲ့အချိန်မှာ ကိလေသာတွေ မဝင်ဘူးလေနော်…။
ဒါကိုကပဲ အတော် တန်ဖိုးဖြတ် မရ နိုင်အောင် ဖြစ်နေ ပြီလေ နော်…ဒလိုလေး ဗုဒ္ဓါနုသတိ ပွားနေ ခြင်းသည် ပင်လျှင် အကြမ်းစား ကိလေသာ တွေကို ခွာနေ တာမို့…ဒါလေးတွေ ခဏခဏ နဲ့ အမြဲ ပွားနေ လာနိုင်ပြီ ဆိုလျှင် စိတ်ကလေး ဟာ..ကိလေသာ တွေကို ကပ်ခွင့် မပေး သလိုမျိုး စိတ်က လေးက တဖြေးဖြေး ငြိမ်လာတာ…ကိလေသာ ကြောင့် စိတ်တွေ ပူလောင်ရ တာဆို တော့…ဒီလို ဗုဒ္ဓါနုသတိ ပွားနေ တာဟာ ကိလေသာ ကို အကြမ်း စားနည်း နဲ့ပယ် နေတာ လို့…အရင်က သိကို မသိခဲ့တာပါ.. ဒါမို့လည်း မသိလို့ မကျင့်ခဲ့ တော့ အပူက ဘယ်မှာလာပြီးငြိမ်းပါ့မလဲ…ဒီလို ဗုဒ္ဓါ နုသတိ ကမ္မဌာန်း ပွားများနည်းကို… မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရ ရိပ်သာ မှာ အားထုတ်နည်းကို အသေးစိတ် သင်ပေး လိုက်တာဗျာ…ကဲ…. ကြည့် ပါဦး… ဗျာ… ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက် သလဲ နော်…ဟိုး… အရင် တခြား ရိပ် သာ တွေ ဝင်ဖူး တုန်းက…ခုလို ဗုဒ္ဓါနုသတိ ပွားများ ပုံကို အ သေးစိတ် သင်ပေး တဲ့ ရိပ်သာ မျိုး မဝင်ဖူး ခဲ့တာ တော့အမှန်ပါ….ဒါမို့လည်း ရိပ်သာဆိုလျှင် ဝိပ သနာ တန်းပြီး ရှုရ တယ်ဘဲ ထင်ခဲ့မိတာပါ..ခု… ကြည့် ပါဦး…မိမိအိမ်ပြန်ရောက်လို့… မိမိက အနု စားကိ လေသာ ပယ်နည်း ဖြစ်တဲ့ အေးအေး ဆေးဆေး အချိန် ရ မှ သေသေ ချာချာ လေး ဘုရား ဆောင် ရှေ့ တင်ပလ္လင်ခွေလေး ထိုင်ပြီး ပွားမယ့်အချိန် မရခဲ့နေရင်တောင်.ခုလို ဗုဒ္ဓါနုသတိ လေး ပွားနေ ခြင်းဖြင့် အလုပ်မအားလို့ မထိုင်နိုင်ပေမယ့် စိတ်ကလေး အားနေတော့ ဂုဏ်တော် ပွားနေ ခြင်းကြောင့်…အကြမ်းစား ကိလေသာ တွေကို ပယ်နေ တာပါလား. ဆိုတာ. ခုမှ..သေသေချာချာ ကြီးကို သဘော ပေါက်ရ တာပါ…နောက်ပြီး ဘုရား အကြောင်း ကို ခရေစေ့ တွင်းကျ တွေးတော နေခြင်းဟာဆိုရင်ဖြင့်… အခြား အတွေးဝင်နေမယ့်အစား.. ဘုရား အကြောင်းတွေး နေခြင်းသည် ပင်လျှင်…ဗုဒ္ဓါနုသတိကို ပွားခြင်းဖြစ်နေတာပါလား…. ဆိုတာလည်း ခုမှ သိလာရတာပါ…။
အကြမ်းစား ကိလေသာ ပယ်နည်း တွေနဲ့ ပယ်ထားတဲ့ အလေ့ အကျင့် များများ ရှိထား တဲ့ သူတ ယောက် ဟာ..အချိန်ရလို့ အေးအေး ဆေးဆေး တရား အားထုတ်ခွင့်လဲရရော…ဟော.. သူလိုလူ က သမာဓိ တွေ ခဏလေး နဲ့ ရလာတာ ပါလား…သမာဓိ မြန်မြန် ရလာ တယ် ဆိုမှ ဖြင့် ဝိပသနာ လည်းရှုရော…ဟော… ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေရဲ့ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း သဘော တွေကို ထင်ထင် ရှား ရှား တွေ့ရ တော့ တာ ပါ လား…ထိုမှ မကသေး…သမာဓိ ထူထောင် နေ တဲ့ အ ချိန် တစုံ တခု ကြောင့် စိတ်ကလေး ညစ်ညူး လာပြန်ရင်လည်း… ဟော… ဗုဒ္ဓါနုသတိ လေးကို ပွားနေလိုက်ရင် စိတ်ကလေး က ပြန် အေး သွား ပြန် ရော…ဒီလို.. လို သ လို အသုံး ပြု လို့ ရနေ တဲ့ အင် မတန် မှ ကောင်းလွန်း လှသည့် ဗုဒ္ဓါ နုသတိ ကမ္မဌာန်း ကြီး ကိုဖြင့်…ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း (၄) ပါးထဲတွင် တပါး အပါ အဝင်ဖြစ် တဲ့ ဗုဒ္ဓါနုသတိ ကမ္မဌာန်း ပွားများနည်း ….နည်း စနစ်များ ကို အသေး စိတ် သင်ကြားပေးနေ သော မောင်းထောင်မြေဇင်းရိပ်သာ ကြီး၏… ကျေးဇူးတရားများ ကိုဖြင့်… ပြန် လည်၍ အမှတ်ရ…သင်ကြားပေးသော ဆရာသမားများကိုဖြင့်… ဦးချကန်တော့ လိုက်ရပါတော့ သည်။ တရားနာရင်း သတိရ၍ ရေးမိပါ၏..မှတ်ချက်။ ။ ဗုဒ္ဓါနုသတိကမ္မဌာန်း ကို ရင်ထဲ၌လှိုက်ခနဲလှိုက်ခနဲအအေးဓာတ်မျိုးရရှိပြီး ပီတိပသတိဖြစ်သည်အထိပွားများရပေသည်။